China Parallel Slide Valve for steam-water system ifektri abakhiqizi | I-Convista
Thayipha Isango Valve
Ingcindezi PN20-50MPa 1500LB-2500LB
Ububanzi bokuqanjwa I-DN 300-500
Isetshenziswa njengamadivayisi wokuvula nokuvala wokupompa uhlelo noma ezinye izinhlelo zepayipi lokucindezela eliphakeme naphakathi kwe-600 kuya ku-1,000MW supercritical (ultra-supercritical) unit steam turbine.
1.Yamukela ingcindezi yokuzivala, ngokuxhuma okushiselwe emaphethelweni womabili.
2.Yamukela i-valve yokudlula kagesi ekungeneni nasekuphumeni kokulinganisa ingcindezi yokuhlukanisa ekungeneni nasekuphumeni.
3Indlela yayo yokuvala isebenzisa isakhiwo esifanayo se-flashboard. Ukufakwa uphawu kwe-Valve kusuka ekucindezelweni okuphakathi esikhundleni se-wedge mechanical force force ukuvimbela i-valve ekuhluphekeni okuyingozi ngesikhathi kuvulwa futhi kuvalwa.
4.Nge-cobalt-based rigid alloy build-up welding, ubuso bokufaka uphawu bufaka ukumelana nokushisa okuphezulu, ukumelana nokugqwala, ukumelana nokuhuzuka, impilo yenkonzo ende nezinye izici.
5.Ngaphansi kokwelashwa kokulwa nokugqwala kanye ne-nitrogenization, indawo yesiqu se-valve ifaka ukumelana nokugqwala okuhle, ukumelana nomhuzuko nokufakwa uphawu kwebhokisi lokufaka okuthembekile.
6.Ingafana namadivayisi kagesi ahlukahlukene asekhaya nawangenisiwe ukuhlangabezana nezidingo zokulawulwa kweDCS futhi uqaphele ukusebenza okukude nokwasendaweni.
7.Izovulwa ngokuphelele noma ivalwe ngesikhathi kusebenza. Ngeke isetshenziswe njenge-valve elawulayo.
Langaphambilini Intwasahlobo egcwele uhlobo lokuphepha lokuphepha (W uchungechunge)
Olandelayo: Kokuzihlanganisa Steel Trunnion egibele Ashiselwe Ngokugcwele Ball Valve
Intwasahlobo evaliwe ilayishwe ngokugcwele uhlobo lokucindezela okuphezulu ...
3226 AWWA C509 NRS Resilient Ehleli Esangweni Valve
3233 AWWA C515 OS & Y Isibindi Esihleli Sihleli ...
Valve ukuphepha valve
I-LVP Water Ring Vacuum Pump